အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က Global Green Growth Institute (GGGI) ၏ Country Director ဖြစ်သူ Dr. Aaron J.M. Russell အား လက်ခံတွေ့ဆုံ – Ministry of Foreign Affairs
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က Global Green Growth Institute (GGGI) ၏ Country Director ဖြစ်သူ Dr. Aaron J.M. Russell အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် Global Green Growth Institute (GGGI) ၏ Country Director ဖြစ်သူ Dr. Aaron J.M. Russell အား ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၁၁၅ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရေး ၊ အစိမ်းရောင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် GGGI တို့အကြား ချုပ်ဆိုထားသည့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ GGGI အဖွဲ့သို့ ပါဝင်ရေးအခြေအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏အမျိုးသားအဆင့် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးမူဝါဒ မူဘောင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း အနာဂတ်တွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။